Public Health in Myanmar: Unnoticed Kitchen Consequences (2)
အမှတ်တမဲ့ မီးဖိုချောင်ဒုက္ခ (၂)
လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများ အစားအသောက် တစ်ခုမှ တစ်ဆင့် နောက်တစ်ခုသို့ ကူးစက်ခြင်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းတီတုံးဟာလည်း ယင်းရောဂါများ ဖြစ်စေဖို့ တရားခံ တစ်ခု ဖြစ်တာမို့ အိမ်ရှင်မများ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ စဉ်းတီးတုံးဟာ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်းမာဖို့ အရေးပါတဲ့ နေရာက ပါဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်မများ အနေဖြင့် သင့်မီးဖိုချောင်အတွက် စဉ်းတီတုံး ရွေးချယ်တော့မည် ဆိုပါလျှင် နောင်တစ်ချိန်တွင် ယင်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် အရှုပ်အရှင်းများ မရှိရလေအောင် မိမိနှင့် သင့်လျော်တဲ့ စဉ်းတီတုံးများကို ရွေးချယ်သင့်ကြပါတယ်။ စဉ်းတီတုံးဟု ဆိုရာဝယ် ရှေးအစဉ်အဆက်ကပင် သစ်သား စဉ်းတီတုံးကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြပြီး အခုခေတ်များမှာတော့ ပလပ်စတစ်၊ ဖန်သား၊ ၀ါး စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စဉ်းတီတုံးများဟူ၍ ဈေးကွက်တွင် သူ့နေရာနှင့်သူ ခေတ်စားလာခဲ့ကြ ပြန်ပါတယ်။
စဉ်းတီတုံးများဟာ သူ့နေရာနှင့်သူ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ ရှိကြလေရာ .. သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စဉ်းတီတုံးများကိုတော့ ရှေးရိုးစဉ်လာကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျစ်လစ်မာကျောသော သစ်သားမျုိုး ဖြစ်သည့် မန်ကျည်းသား၊ မာဘယ်လ်သား စဉ်းတီတုံးများကို ရှေးအရင် လူကြီးများ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်သား စဉ်းတီတုံးကို လူကြိုက်များ ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သူ့ကို အသုံးပြုစဉ်မှာ အသံ ဆူညံမှု သိပ်မရှိခြင်း၊ လှီးဖြတ်ချိန်တွင် ညက်ညောသော ထိတွေ့မှုပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်သား စဉ်းတီတုံးများဟာ သန့်ရှင်းရတာ ခက်ခဲခြင်း၊ အသုံးပြုတာ များလာတာနဲ့အမျှ အစင်းကြောင်းတွေ ပေါ်လာပြီး အဲဒီ အကြောင်းတွေကြားမှာ ဘက်တီးရီးယား တချို့ ပုန်းခိုနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ သစ်သားများမှာ ပါရှိတဲ့ အပေါက်ငယ် ကလေးများဟာ အခန့်မသင့်တဲ့အခါ စွတ်စိုမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ယင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားများ ပေါက်ပွား နေထိုင်မှုကို အားပေးစေခြင်း စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးကို အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို ထိခိုက်နိုင်လာစရာ အကြောင်း ရှိပါတယ်။ ယခုခေတ်များမှာတော့
၀ါးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စဉ်းတီတုံးဟာ မာကျောတဲ့ မျက်နှာပြင်ရှိခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားပိုး အချို့ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ၊ သက်တမ်းရှည်ရှည် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စတဲ့ ကောင်းချက် တချို့နဲ့ ခေတ်စားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပလစ်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စဉ်းတီတုံးများကတော့ စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ အပေါက်ငယ်များ မပါဝင်ခြင်း၊ သန့်စင်ဖို့ လွယ်ကူခြင်း စတာတွေကြောင့် သင့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု အပေးဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဖန်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စဉ်းတီတုံးများကတော့ လှပ သပ်ရပ်လှပြီး အပူခံနိုင်ခြင်း၊ စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ အပေါက်များ မပါဝင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရတာ လွယ်ကူခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပေမယ့် သူ့ကို အသုံးပြုစဉ်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ့် အသံတွေကတော့ အိမ်ရှင်မတွေကို စိတ်အနှောင့်ယှက် ပေးကောင်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သည့်အပြင် မတော်တဆ လွတ်ကျမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် အလွယ်တကူ ကွဲစေနိုင်ပြီး အနီးရှိ အစားအသောက် ပန်းကန်များထဲသို့လည်း ၀င်ရောက်စေနိုင်ခြင်းဖြင့် လူသားတို့အား အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တစ်အိမ်တွင် စဉ်းတီတုံး အနည်းဆုံး တစ်ခု ရှိတတ်ကြပြီး ၄- ၅ ခုထက်မက ရှိနေခြင်းဟာ ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင် အစားအသောက် အမျိုးမျိုးအတွက် သီးခြား စဉ်းတီတုံးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အစားအသောက်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါတချို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ စဉ်းတီတုံးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသားစိမ်း ၊ ငါးစိမ်းများ ခုတ်ထစ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့စဉ်းတီတုံးအား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ လှီးဖြတ်ရာတွင် အသုံးမပြုအောင် သင့်ကို အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ စဉ်းတီတုံးများဟာ အရောင်အလိုက် သင့်ကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်များကို ပေးစေနိုင်တာကတော့ …
၁။ အစိမ်းရောင် စဉ်းတီတုံး … သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စီစဉ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်
၂။ အ၀ါရောင် စဉ်းတီတုံး… ကြက်၊ ဘဲ စသည်တို့ ခုတ်ထစ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်
၃။ အပြာရောင် စဉ်းတီတုံး… ချက်ပြီးသား သားငါးများ ခုတ်ထစ်ရာတွင် သုံးရန်
၄။ အဖြူရောင် စဉ်းတီတုံး… ထောပတ်၊ ဒိန်ခဲစသည့် နို့ထွက် ပစ္စည်းများ အတွက် သုံးရန်
၅။ အသားရောင်၊ အညိုရောင် စဉ်းတီတုံး… ငါးနှင့် ပင်လယ်စာများ အတွက် သုံးရန်
၆။ အနီရောင် စဉ်းတီတုံး … အနီရောင် အသားများ ဖြစ်သည့် ၀က်သား၊ အမဲသား စသည်တို့ အတွက် သုံးရန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အရောင် ခွဲခြားပြီး အသုံးမပြုချင်ဘူး ဆိုလျှင်တောင် အသားငါးများ အတွက် အသုံးပြုသော စဉ်းတီတုံးဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ မစီစဉ်မိ စေရန် သတိပြုသင့်ပါတယ်။
၁။ သင်ဟာ ဘယ်လို စဉ်းတီတုံး အမျိုးအစားကို အသုံးပြုသည် ဖြစ်စေ အသုံးပြုပြီးတာနဲ့ ယင်းတို့ကို ဆပ်ပြာရေ ပူပူကလေးနဲ့ ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ အခါအခွင့်သင့်သလို ကလိုရင်းဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရေတစ်ဂါလံနဲ့ ကလိုရင်း ပါတဲ့ အရောင်ချွတ်ဆေး လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း နှုန်းဖြင့် ရောစပ်ကာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အစွန်းချွတ်ဆေး ဆိုရာမှာလည်း သံပုရာ၊ နာနတ် စတဲ့ အမွှေးနံ့တွေ ပါတဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေး မဟုတ်ဖို့ သတိထားရပါမယ်။ သို့မဟုတ် ရှာလကာရည် တစ်ဆ ရေ ၅ ဆ ရောပြီး သန့်ရှင်းနိင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် သင်၏ စဉ်းတီတုံးသည် သစ်သား စဉ်းတီတုံး ဖြစ်မည်ဆိုပါက စဉ်းတီတုံးအား ရေဇလုံထဲတွင် ကြာရှည်စွာ စိမ်ထားမိမည် ဆိုပါလျှင် စဉ်းတီတုံး အပေါက်များထဲသို့ ရေများစိမ့်ဝင်ကာ ခြောက်သွေ့သော အခါတွင် အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးမှာ ဖြစ်တာမို့ သစ်သား စဉ်းတီတုံးကို ရေမစိမ် ထားမိစေရန် အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ စဉ်းတီတုံး တစ်ခုဟာ အစင်းကြောင်း ထင်လာပြီး အဲဒီ အရေးအကြောင်းတွေမှာ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း စတာတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ပုန်းအောင်း နိုင်လာပြီ ဆိုရင် သန့်စင်ဖို့ အတော်ကို ခက်ခဲလာတာမို့ ယင်း စဉ်းတီတုံး နေရာမှာ အသစ်တခုနဲ့ အစားထိုး သင့်ပါတယ်။
၃။ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ စဉ်းတီတုံး၊ ဓား စတာတွေကို မဆေးကြောဘဲ နောက်ထပ် အစားအစာများကို မလှီးဖြတ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီလို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသားစိမ်း၊ ငါးစ်ိမ်းမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ပြန့်ပွားဖို့ အခွင့်အရေး ပေးသလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ သင့်ရဲ့စဉ်းတီတုံးကို သေချာစွာ ဆေးကြော ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း နေရာတကျ မသိမ်းဆည်းခင်မှာ ကောင်းစွာ ခြောက်မခြောက် စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် စဉ်းတီတုံးတွင် မှိုနှင့် ဘက်တီးရီးယားများ စွဲကပ်မှုကို လျော့ပါး စေပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် စဉ်းတီတုံးတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ တွယ်ကပ်နေသည် ဆိုလျှင်တောင် ယင်းတို့ဟာ စွတ်စိုမှု မရှိဘဲ နာရီ အနည်းငယ်ထက် ပိုပြီး အသက်ရှင်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။ စဉ်းတီတုံးကို အသုံးပြုပြီး ဒီအတိုင်း ထားမည် ဆိုပါလျှင် စဉ်းတီတုန်း အောက်ခြေတွင် စိုစွတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပိုးမွှားများ ပိုမို ပေါက်ပွားလာမှာ ဖြစ်တာမို့ သင် အသုံးမပြုတော့သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စဉ်းတီတုံးကို ထောင့်တစ်နေရာတွင် ထောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ထို့နောက် ခြောက်သွေ့ပြီ ဆိုပါက နေရာတကျ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း လေသလပ် ခံထားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး အ၀တ်များဖြင့် သုတ်ကာ ခြောက်သွေ့စေခြင်းဟာလည်း အ၀တ်မှ ပိုးမွှားများကို ပြန့်ပွားစေတာမို့ ရှောင်ရှား စေချင်ပါတယ်။
၅။ ပန်းကန်ဆေးစက်ဖြင့် စဉ်းတီတုံးကို ဆေးကြောခြင်းဟာ ပလပ်စတစ် စဉ်းတီတုံးများ အတွက်သာ ကောင်းမွန်တာမို့ သစ်သား စဉ်းတီတုံးကို သုံးမိမယ်ဆိုလျှင် မကြာခင်မှာပင် ခြောက်သွေ့သွားနိုင်ပြီး ရေရည်ခံနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
၆။ သင်ဟာ သစ်သား စဉ်းတီတုံးကို အသုံးပြုရတာ နှစ်သက်တယ် ဆိုရင်တော့
၆.၁။ ယင်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အမြဲတမ်း ကောင်းမွန်နေအောင် အသားငါးများ စီစဉ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကော်ပတ် စားပေးရပါမယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ စဉ်းတီတုံးဟာ အရေးအကြောင်း ထူထပ်စွာနဲ့ ဘက်တီးရီးယားနှင့် အခြားသော ပိုမွှားများ ပျော်မြူးဖို့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
၆.၂ ။ သစ်သား စဉ်းတီတုံးများကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ခါ ဆီဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပျဉ်သားသေအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သစ်ကြောများကို ညက်စေပြီး ဘက်တီးရီးတို့ ရန်မှ ကာကွယ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီဖြင့် သုတ်လိမ်းရာတွင် ပထမဦးစွာ ဆီကို အနည်းငယ် ပူနွေးစေပြီးမှ အ၀တ်သားနုနုဖြင့် ဆွတ်ပြီး သစ်ကြောအတိုင်း ပွတ်တိုက် ပေးခြင်းဖြင့် ဆီများ သစ်ကြောများထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနောက် မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ထားပြီး အ၀တ်ခြောက်ဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ဆီ သုတ်လိမ်း ပေးခြင်းဖြင့် အဆီများသည် သစ်သား စဉ်းတီတုံးရှိ အပေါက်များကို ပိတ်သွားစေပြီး အရည်များ စိမ့်ဝင် စွတ်စိုမှုကို ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သင့်စဉ်းတီတုံးအား သန့်ရှင်းရာတွင် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော စတီးလ်ယောက်မဖြင့် ခြစ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သစ်သား စဉ်းတီတုံးအား စိုစွတ်မှုကို ဖြစ်စေသော ရာခိုင်နှုန်းကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စတီးလ် brush ဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်စဉ်းတီတုံးအား ပိုမို ပျက်စီး စေနိုင်သောကြောင့် ယင်းသို့ မပြုလုပ်မိ စေရန် သတိပြုသင့်ပေသည်။
၈။ စဉ်းတီတုံးကို အသုံးပြုသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရှာလကာရည် အပြင်းစားဖြင့် ပွတ်တိုက် ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ စဉ်းတီတုံးကို ပိုးမွှား ကင်းစင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာလကာရည်တွင် ပါဝင်သော acetic acid သည် ပိုးသတ်ရန် အတွက် ကောင်းမွန်သော အက်စစ်လတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူသားတို့အား ရောဂါ ပေးစေနိုင်သော E coli, salmonella နှင့် staphylococcus စသည့် ပိုးမွှားများ ခိုအောင်းနေခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မီးဖိုချောင်တွင် ပြင်းအားကောင်းသော ရှာလကာရည် ဖြန်းဗူး တစ်ဗူး ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် သင့်စဉ်းတီတုံးအား အချိန်တိုအတွင်း သန့်ရှင်း စေနိုင်ပါတယ်။
၉။ ပြင်းအား ၃ရာခိုင်နှုန်းရှိ hydrogen peroxide ကိုလည်း ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေရန် အလို့ငှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပိုးမွှားများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ရှာလကာရည် ဆွတ်ထားသော တစ်ရှုးစ တစ်ခုဖြင့် စဉ်းတီတုံးအား အရင် ပွတ်တိုက်ပေးရပါမယ်။ ထို့နောက်တွင်မှ hydrogen peroxide ပါသော တစ်ရှုးဖြင့် ပွတ်တိုက် ပေးရပါမယ်။
၁၀။ စဉ်းတီတုံးကို မ၀ယ်ခင်မှာလည်း အသုံးပြုရန် စိတ်ချရသော အညွှန်းနဲ့ ထောက်ခံချက်ပါတဲ့ စဉ်းတီတုံး ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ လေ့လာရပါမယ်။ (အိမ်တွင်း စီးပွားဖြစ် သစ်သား စဉ်းတီတုံး ဆိုလျှင်လည်း သစ်သားအမျိုးအစား၊ အက်ကြောင်းနှင့် သစ်ကြော၊ အပေါက်အရွယ်အစားများကို စစ်ဆေးပြီး ၀ယ်သင့်ပါတယ်)။
၁၁။ စဉ်းတီတုံးနှင့် အနံ့အသက်များ စဉ်းတီတုံးကို အသုံးပြုသည့် သား၊ ငါး၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန် စသည့် အစား အသောက် အမျိုးအစား အလိုက် အနံ့အသက်များ စွဲထင် ကျန်တတ်လေရာ အချို့သော အနံ့အသက်များကို ပျောက်ပျက်စေရန် အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၁၁.၁။ ဆားကြမ်း သို့မဟုတ် မုန့်ဖုတ် ဆိုဒါ - စဉ်းတီတုံးအား ဆားကြမ်း သို့မဟုတ် မုန့်ဖုတ် ဆိုဒါများဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးပြီး မိနစ် အနည်းငယ်ကြာ ထားပြီး ရေဖြင့် ကျင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁.၂။ အနံ့ဆိုးများနှင့် ရှောက်သီး ရှောက်ရည် - အခြား လွယ်ကူသော နည်းလမ်း တစ်ခုမှာ ကြက်သွန်၊ ဂျင်းစသည်တို့ဖြင့် စွဲထင်နေသော စဉ်းတီတုံးအား ရှောက်ရည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ရှောက်သီးစိတ်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁.၃။ အနံ့ဆိုးများနှင့် ရှာလကာရည် - ရှာလကာရည် အပြင်းစားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း အနံ့ဆိုးများ ကိုဖယ်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နည်းလမ်းကိုပဲ သုံးသုံး အဲဒီနောက်မှာတော့ သင့်စဉ်းတီတုံးအား အကြောသေအောင် ပြန်လုပ်ပေးဖို့ လိုကောင်း လိုပါလိမ့်မယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်
Labels: Hygiene, Lifestyle, Nutrition အာဟာရ
မွန်းသက်ပန်ကတော့ အသက်ရှည်ဦးမယ်။ ပို့စ်လာမတင်တာ ကြာလို့ ဘယ်ရောက်နေလည်းမသိလို့ တွေးနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် ဘလော့ဂ်ထဲ ၀င်လာတာနဲ့ ပို့စ်တင်ထားတာ တွေ့တာပဲ။ မွန်းသက်ပန် ပို့စ်လေးက အိမ်ရှင်မတွေအတွက် သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီဘလော့မှာက အခုတလော အမျိုးသားတွေပဲ စာလာဖတ်တာများလို့ ဖတ်ပြီးရင် အိမ်ရှင်မတွေကို ပြန်ပြောပြဖို့ တိုက်တွန်းမှ ဖြစ်မယ်။
သတိရပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရှင့်...
ညကမှ စာဖတ်တာ စိတ်ညစ်လာလို့ လာလည်ဖြစ်ရင်း တင်လိုက်တာပါ။
အမျိုးသားများအနေနဲ့ အိမ်ရှင်မတွေကို ပြန်ပြောပြပေးနိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ မမရယ် နော်..
Why are dwelling with sub,non-standard Gawgyi font ?
Grow -up, get out of the SHIT.
Mind your language. This is not an IT forum. We have right to choose which font to use.
Ye Mon Myint.
Aung Pyi Sone Aye said...
Excellent ! Useful for People